Zoomgu: Oomatshini abathengisa abakrelekrele benza ukuthengisa okulula kunye nokulula-kweendaba zeshishini-Hunan Zhonggu Science and Technology Co, Ltd.
Zoomgu: Oomatshini abathengisa abakrelekrele benza ukuthengisa okulula kwaye kube lula
kwizimvo:19 umbhali: Ixesha lokushicilela: 19 imvelaphi:
I-Zoomgu siseti yophando kumatshini wokuthengisa kunye nophuhliso lokuvelisa, ubukrelekrele bokuzenzela, i-Intanethi yezinto, iinkonzo zelifu, idatha enkulu, intlawulo yokuhambisa iselfowuni, ukuthengisa izixhobo zekhompyutha kunye nophuhliso lwesoftware kunye netekhnoloji yokwenza ngokwezifiso kwelinye lamashishini obuchwephesha besizwe, uhlala uhambelana uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso, ukulima okunzulu kumatshini wokuthengisa umatshini iminyaka eli-17. Okwangoku, inkampani ineenjineli ezingaphezu kwe-100 ezenziwe liqela lophando kunye nophuhliso.
Inombolo yomatshini ekwi-intanethi, indlela yokubhatala yosuku olunye, idatha yokukhula komatshini, uhlalutyo lobudala besini ... Kwisiboniso kwiholo yomboniso, intatheli yabona ukuba idatha kwiqonga ledatha enkulu yeSAAS Smart Operations yeZoomgu ihlaziywa rhoqo.
Okwangoku, phantse amalungelo awodwa omenzi wechiza angama-200 asetyenzisiwe, amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda weentlobo ezahlukeneyo zokugcina impahla, ezidityanisiweyo ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula, kubandakanya ne-14 yokuvelisa amalungelo awodwa omenzi wechiza, umfuziselo welungelo lobunikazi 129, ilungelo lobunikazi lesoftware ngaphezulu kwezinto ezili-10. Ukuza kuthi ga ngoku, iimveliso zefektri ye-Zoomgu kwimarike ukugcina phantse iiyunithi ezingama-150,000, ixabiso lokulindelwa kulindeleke ukuba lifike kwi-yuan yezigidi ezingama-450 kulo nyaka, iziphumo ziye zadlula kwiiyunithi ezingama-70,000, zibonisa ukukhula okuzinzileyo.
Okulandelayo: Umzi mveliso wokuthengisa umatshini ungena kwixesha elingenamntu.